I-Semalt iphakamisa izinyathelo ezilula ezingu-3 zokwehlisa okuqukethwe kwewebhu
Uma ufuna ukudonsa idatha emakhasini ahlukene ewebhu, amasayithi omphakathi, blogs, kuzodingeka ufunde ezinye izilimi zokuhlela ezifana ne-C ++ ne-Python. Muva nje, sibonile izimo ezehlukene zokwebiwa kokuqukethwe kwi-intanethi, futhi eziningi zalezi zimo zihilela okuqukethwe okuthungatha amathuluzi nemiyalo ezenzakalelayo. Kubasebenzisi be-Windows ne-Linux, amasu amaningi we-web scraping athuthukisiwe alulaza umsebenzi wabo ngezinga elithile. Abanye abantu, noma kunjalo, bakhetha ukukhipha okuqukethwe ngesandla, kodwa kuthatha isikhathi esithathayo.
Lapha siye saxoxa ngezinyathelo ezintathu ezilula zokwenza okuqukethwe kwewebhu kungakapheli imizuzwana engama-60.
Wonke umsebenzisi ononya kufanele akwenze:
1. Finyelela ithuluzi le-intanethi:
Ungazama noma yiluphi uhlelo oludumile lwe-web scraping njenge-Extracty, Import. io, no-Portia ngo-Scrapinghub. Ngenisa. Io ibike ukuthi ishaya amakhasi angaphezu kwezigidi ezingu-4 ku-intanethi. Ingahlinzeka ngemininingwane ephumelelayo futhi enenzuzo futhi iwusizo kuwo wonke amabhizinisi, kusukela ekuqaleni kuya kwamabhizinisi amakhulu kanye nemikhiqizo edumile. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lihle kubafundisi abazimele, izinhlangano zokusiza, izintatheli, kanye nabahleli. Ngenisa. Io yaziwa ukuletha umkhiqizo we-SaaS osenza sikwazi ukuguqula okuqukethwe kwewebhu zibe ulwazi olufundekayo nolungelelwe kahle. Ubuchwepheshe bayo bokufunda umshini kwenza ukungenisa. Iokhethwa kuqala kokubili amakhodi kanye non-coders.
Ngakolunye uhlangothi, i-Extracty iguqula okuqukethwe kwewebhu ibe idatha ewusizo ngaphandle kwesidingo samakhodi. Ikuvumela ukuthi usebenze izinkulungwane zama-URL ngesikhathi esifanayo noma esimisweni. Ungathola ukufinyelela kwamakhulu kuya ezinkulungwaneni zemigqa yedatha usebenzisa i-Extract. Loluhlelo lwe-web scraping lwenza umsebenzi wakho ube lula futhi ngokushesha futhi ugijima ngokuphelele ohlelweni lwefu.
I-Portia ngu-Scrapinghub ingenye ithuluzi elihle elihle lokubhuqa lewebhu elenza umsebenzi wakho ube lula futhi uqoqa idatha kumafomethi akho afiselekayo. U-Portia usivumela ukuthi siqoqe ulwazi oluvela kumawebhusayithi ahlukene futhi akudingi ulwazi olulodwa lohlelo. Ungakha isifanekiso ngokuchofoza ezakhiweni noma amakhasi ongathanda ukukhipha, futhi u-Portia uzodala isicabucabu sayo esingeke sikhiphe kuphela idatha yakho kodwa futhi sizokweqa okuqukethwe kwakho kuwebhu.
2. Faka i-URL yomncintiswano:
Uma usuvele ukhethe isevisi ye-web yokuhlunga, isinyathelo esilandelayo ukufaka i-URL yomncintiswano yakho bese uqala ukusebenzisa isikhala sakho. Amanye alawa mathuluzi azokhipha iwebhusayithi yakho yonke ngemizuzwana embalwa, kanti amanye azokhipha kancane okuqukethwe kwakho.
3. Thumela idatha yakho ekhishwe:
Uma idatha efunwayo itholakala, isinyathelo sokugcina ukuthekelisa idatha yakho ekhonjiwe. Kunezindlela ezithile ongathumela ngazo idatha ekhishwe. Ama-scrapers web (i-7) akha ulwazi emafomu amatafula, izinhlu, namaphethini, okwenza kube lula kubasebenzisi ukulanda noma ukuthumela amafayela afisa. Amafomethi amabili asekela kakhulu yi-CSV ne-JSON. Cishe zonke izinsizakalo zokwesekwa kokuqukethwe zisekela lezi zakhiwo. Kungenzeka ukuthi sisebenzise isikhala sethu bese sigcina idatha ngokusetha igama lefayela bese ukhetha ifomethi oyifunayo. Singasebenzisa futhi inketho ye-Item Pipeline yokungenisa. Io, Extracty noPortia ukubeka imiphumela emgqeni bese bahlela amafayela e-CSV ne-JSON ngenkathi kukhishwa Source .